जीसनको नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रभावकारीताको खोजी तथा सिर्जनात्मक लेखन कार्यशाला
३१ भदौ नवलपरासी
शैक्षिक एक्यवद्धताको समुह नेपाल जिसन नवलपरासीले नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रभावकारीताको खोजी तथा सिर्जनात्मक लेखन कार्यशाला सम्पन्न् गरेको छ । जिसन नवलपरासीले बर्दघाटमा आयोजना गरेको उक्त एक दिवसीय कार्यशालामा जिसनमा आवद्ध विद्यालयका नेपाली शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
जिसनका अध्यक्ष्य ईन्द्र गुरुगंको अध्यक्षता प्यापसन केन्द्रीय सदस्य यम बहहादुर थापाको प्रमु आतिथ्यतामा उक्त कार्यशाला सम्पन्न् भएको थियो । कार्यशालामा वरिष्ठ कवि तथा समालोचक द्धय डा. राम प्रसाद ज्ञवाली र डा.देवि नेपालले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । कार्यशाला समापन कार्यक्रममा बोल्ने बक्क्ताहरुले अब संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अंग्रेजी भाषासंगै नेपाली भाषालाई पनि संगसगै लैजान जरुरी रहेकोमा
जोड दिएका थिए ।
उनीहरुले अंग्रेजी भाषालाई मात्र बढी जोड दिएर अघि बढेका कारण अहिलेका विद्यार्थीहरुले नेपाली शब्दहरु नै बुझन नसकेको बताउदै यस तर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको मा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा प्यापसन केन्द्रीय सदस्य यम बहहादुर थापा ,जिसनका सल्लाहकार डि.वि. अधिकारी लगाएतले आ आफ्ना भनाईहरु राख्नु भएको थियो ।